Special or Others: Kids & Family
11 มิ.ย. 2563 | 1,738 Views
04 Jun 2020 | 1,135 views အမရေိကနျနိုငျငံ တငျနကျစီပွညျနယျ (Tennessee) ဟနျဒါဆငျဗီးလျမွို့ (Hendersonville) ရှိ မိသားစုတဈစုက “ကိုယီ ပရိုကျဈ” (Coye Price) လို့ချေါတဲ့ အသကျ ၉ နှဈကောငျလေး ငါးသှားမြှားရငျးနဲ့ အလှနျကွီးမားတဲ့ အလေးခြိနျ ၈၈ ပေါငျ (၃၆.၈ ကီလိုဂရမျ) ရှိတဲ့ “စတားဂငျြးငါး” (
13 May 2019 | 1,285 views လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွေအရ ဂျပန်နိုင်ငံက ကျောင်းသား ကလေးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံး အဖြစ် တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာရှနိုင်ငံတွေက ကလေးတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံက ကလေးတွေထက် ပိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
11 Jan 2019 | 1,155 views ဂျပန်နိုင်ငံမှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ၁ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်လေးဟာ မွေးစကတည်းက ထူးထူးခြားခြား သန်စွမ်းဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်ကြောင့် လူမှုကွန်ယက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတွေရဲ့ အသည်းကျော်လေးဖြစ်လာခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ခေါင်းလျှော်ရည်ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေရတဲ့ ရုပ်သံစတားလေးတစ်ဦးြ
05 Dec 2018 | 1,139 views အသက် ၇ နှစ် နဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်လာတယ်..!? OMG ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား..? ဒီလောက်အသက်အရွယ်လေးနဲ့ ဘာတွေလုပ်ပြီးများ သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်လာတာပါလိမ့်လို့ လူတိုင်း မယုံတစ်ဝက် ယုံတစ်ဝက် ဖြစ်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
18 Sep 2018 | 1,324 views ခုလို မိုးအေးအေးလေးမှာ ဆိုရင်ဖြင့် romance,drama အချစ်၊ အလွမ်း ဇာတ်လမ်း လေးတွေကြည့်ရတာလဲ feel တစ်မျိုးပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ Kdrama တွေ Chinese drama တွေ ကြည့်ပါများပြီး ဇာတ်လမ်း လေးတွေကဆင်တူရိုးမှားတွေ ဖြစ်နေတာများလို့ ငြီးငွေ့နေပြီလား။ စိတ်မပူပါနဲ့ ချစ်စရာေ
07 Sep 2018 | 1,696 views ကြောင်တွေအချင်းချင်း တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင်ကြည့်ပြီး “ညောင်.. ညောင်” နဲ့ အော်နေတာ သင်မြင်ဖူးပါသလား..? မအော်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြောင်တွေက လူကိုတွေ့ရင်တော့ “ညောင်” လို့ အသံပြုတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား..? တစ်ခါတစ်လေများဆိုရင် ဆက်တိုက်ကို “ညောင်.. ညောင်” နဲ့ အော်နေတော့
12 Dec 2017 | 1,144 views အသက်(၆)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Ryan ဆိုသူ ကောင်လေးဟာ ကလေးကစားစရာတွေကို အကြံပြုသုံးသပ်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးရင်း YouTube ကနေရရှိတဲ့ ဝင်ငွေဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ(၁၁)သန်း ရှိပါတယ်။
Got Talent က ၉ နှစ်အရွယ် ထူးခြားတဲ့ အသံပိုင်ရှင်မိန်းကလေး
23 Aug 2017 | 1,101 views Got Talent ပြိုင်ပွဲတွေဟာ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ပြသရတာဖြစ်လို့ သီချင်းဆိုရုံ သက်သက်ဆိုရင်တော့ ဒိုင်တွေရဲ့ ရွေးချယ်ခံရမှုကို ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုပ်အားခကို စကားကြီး သုံးခွန်းနဲ့ လဲခဲ့သူ
10 Aug 2017 | 1,143 views ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ထံဆုတောင်းတဲ့သူတွေကို ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးနဲ့ စောင့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ အဖြေသုံးမျိုးပဲ ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ လူတွေကဆိုကြတယ်။ မှန်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အဖြေကို ချက်ချင်းရရင် မဆိုင်းမတွပျော်ရွင်သွားကြပြီး စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဆိုရင် အနည်းနဲ့အများတေ
07 Jul 2017 | 1,245 views ကလေးလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ ခဈြစရာ ကစားစရာ အရုပျလေးကိုကွညျ့ပွီး စိတျကူးယဉျတတျကွတာ သဘာဝပဲဖွဈပါတယျ။ ယောကျြားလေးတှကေ စပိုကျဒါမနျး၊ စူပါမနျး စသဖွငျ့ စိတျကူးယဉျတတျကွသလို မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ ဘာဘီအရုပျမလေးတှဟာ သူတို့ စိတျကူးယဉျလို့မဆုံး အားကလြို့ မဆုံးတဲ့ အရုပျလေ